I-24H yeGlobal Serviece -I-NBC yeTekhnoloji yeTekhnoloji yase-Co, Ltd.
Misela iofisi eDongguan (China Mainland), eHong Kong naseMelika, ukuphendula ngokukhawuleza kumthengi wehlabathi kwi-24H.
Ukubonelela ngenkonzo engcono kubathengi, kwisiseko sefektri, simisela iofisi e-geogia America, HongKong (China), eDongguan Nancheng (Mainland), ejolise kwi-R & D / yokuThengisa, ukuphendula umthengi ngokukhawuleza, kunxibelelwano olungenasiphelo kwihlabathi.
Nika iisampulu kwiintsuku ezingama-3-5, uthembisa ukugqiba uyilo / ukuphuhlisa ukungunda ngaphakathi kweentsuku ezili-15.
Siqokelela iinjineli ze-R & D ezinamaqondo aphakamileyo, amava, ukuvelisa izixhobo, ukuyila izixhobo, ukuzenzela, iminyaka eli-10 + ekukhanyeni, amava esisombululo sokudibanisa umbane, ulwenziwo, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo sokudibanisa. Ulungile ekuphatheni ngehardware ekumgangatho ophezulu kunye neemveliso zentsimbi engaqhelekanga, ixesha elifutshane lokuhambisa, inkonzo yokuphendula ngokukhawuleza.
Abasebenzi abanezakhono eziphakamileyo, banikezela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu kumthengi
I-Houd kunye nokukhokela kwetekhnoloji ephezulu, gxila ekuhlakuleleni nasekuziseni iitalente. Ngoku, ishishini linabasebenzi abanezakhono eziphezulu, kwiHoud kunye noGqirha aba-4, kwaye abantu abangama-26 banesidanga okanye isidanga semasters, iipesenti ezingama-40 zabo bonke abasebenzi banesidanga sekholeji okanye ngaphezulu. Bonke abasebenzi bayazibhokoxa emsebenzini, benza izinto ezintsha, baya ngaphaya kwabo, bakhuthaze uphuhliso lwamashishini, banike izisombululo ezitsha kumthengi.
Okwangoku, ishishini liyasebenza ukucwangcisa iimveliso ezintsha, zenza ukungenamda okunokwenzeka kunxibelelwano lwehlabathi kunye nokusasazeka kwesandi kwendalo, ngaphaya koko, i-NBC ikwahoye noluntu lwentlalo, inkcubeko yemfundo kunye nendalo eluhlaza njl.